गहिरो प्रेम मा रहेर इन्गेजमेन्ट समेत गरेका अक्षय र शिल्पाको सम्बन्ध यो एक कारणले गर्दा बिग्रिएको थियो ? – Sunaulo Nepal TV
गहिरो प्रेम मा रहेर इन्गेजमेन्ट समेत गरेका अक्षय र शिल्पाको सम्बन्ध यो एक कारणले गर्दा बिग्रिएको थियो ?
काठमाडौं । बलिउड खेलाडी अक्षय कुमारले बलिउडलाई धेरै सुपरहिट फिल्महरु दिएका छन्। बलिउडको साथसाथै उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका कारण पनि सुर्खेतमा रहन्छन्। एकै साथ, उनको दिनहरुमा पनि, उनी आफ्नो अ’फे’यर को कारण धेरै चर्चा मा छन्। एकै साथ, विवाह पछि, अक्षय को नाम प्रियंका र कैटरीना कैफ संग जोडिएको थियो।
जस्तै अक्षय धेरै सुपर हिट फिल्महरु को एक हिस्सा भएको छ, उनले धेरै अभिनेत्रीहरु संग आफ्नो प्रेम बनाएका छन्। आउनुहोस्, आज हामी अक्षय संग शिल्पा शेट्टी को अफेयर को बारे मा जान्नेछौं।
भनिन्छ कि उनीहरुको जवानी को समय मा, अक्षय र शिल्पा को अफेयर को बारे मा धेरै चर्चा मा आए। दुबै आफ्नो सम्बन्ध को बारे मा धेरै गम्भीर थिए। दुबैको इन्गेजमेन्ट समेत भइसकेको थियो र दुबै जना बिहे गर्न पनि लागेका थिए। तर यो भनिन्छ कि अन्त मा, अक्षय बेवफाई गरे र नतीजा यो भयो कि विवाह उनीहरु दुबै को लागी टुट्यो र शिल्पा यस बाट नराम्रोसँग टुट्यो।
ब्रेकअप पछि शिल्पाले अक्षयमाथि धेरै गम्भीर आरोप लगाए। शिल्पाले भनिन्, “मलाई बिल्कुल थाहा थिएन कि अक्षयले मेरो साथमा यस्तो गर्ने, मलाई ट्विंकल संग कुनै गुनासो छैन किनकि यदि मेरो पार्टनरले मलाई धोका दिन्छ भने, म अरु कसैलाई के भन्नु?” शिल्पाले अक्षयलाई ठट्टा गर्दै भनिन्, “अक्षयले मलाई दुई पटक प्रयोग गरे र मलाई धोका दिए, जब पनि उसले अरु कसैलाई भेट्टायो, उसले मलाई छोड्यो।
Previous परिणीति चोपडा, अनुपम खेरसहित भारतीय कलाकार काठमाडौंमा
Next सामन्थाले डिभोर्सको घोषणा गरेपछि उनका पूर्व प्रेमी सिद्धार्थले भने, ‘धोकेवाज कहिले पनि फल्न फूल्न सक्दैन’